Jamaahiirta Chelsea Oo Baraha Blushada Ku Aflagaadeeyay Boodhka & Tababaraha Kooxdooda Kadib Dhaawicii Ruben Loftus-Cheek. - Gool24.Net
Jamaahiirta Chelsea Oo Baraha Blushada Ku Aflagaadeeyay Boodhka & Tababaraha Kooxdooda Kadib Dhaawicii Ruben Loftus-Cheek.
Jamaahiirta kooxda Chelsea ayaa qalbi jab ka muujiyay sababtii uu dhaawucu u soo gaadhay xidiga khadka dhexe ee Ruben Loftus-Cheek.
Chelsea ayaa go’aan lama filaan ah ku qaadatay in ay kulan saaxiibtinimo oo yuhuud nacaybka lagula dagaalamayay ay ciyaarto laba todobaad ka hor finalka Europa League ee ay Arsenal la ciyaari doonaan.
Waxayna xalay Chelsea guul guul ka gaadhay kooxda New England oo ay kulan saaxiibtinimo oo lacag loogu ururinayay Yuhuuda ay kuwada ciyaareen dalka Maraykanka.
Maurizio Sarri ayaa shax xoogan ku soo galay kulankan isaga oo ku soo wada bilaabay ciyaartoy ay ka mid yihiin Eden Hazard, David Luiz iyo goolhaye Kepa.
Laakiin jamaahiirta Chelsea ayay qalbi jab ku noqotay markii ay arkeen xidiga khadka dhexe ee Ruben Loftus-Cheek oo dhaawac looga saaray kulankii saaxiibtinimo ee New England.
Kadib markii ay jamaahiirta Blues xaqiijisteen in Ruben Loftus-Cheek aanu wax fursad ah u heli doonin in uu taam u noqdo kulanka Arsenal ee finalka Europa League waxay cadho kula dhaceen kooxdooda.
Taageerayaasha Chelsea ayaa baraha bulshada ku aflagaadeeyay Maurizio Sarri iyo boodhka kooxdooda ee sababta u ahaa in waqti sidan xaasaasi u ah ay ciyaartoydooda halis ku galiyeen kulan saaxiibtinimo.
Kooxda Chelsea ayaa saddex maalmood oo kaliya kadib kulankoodii xili ciyaareedkan ugu danbeeyay ee horyaalka England waxay u safreen dalka Maraykanka laakiin waxa uu waqtigani noqonday laba todobaad oo kaliya ka hor finalka UEFA Europa League Ee May 29.
Chelsea ugu safratay USA si ay ugu gargaarto Yuhuuda waxaana ka danbeeya mulkiilaha Chelsea ee Roman Abramovich kaas oo ah nin asal ku leh dalka Isreal.
Mulkiilaha Chelsea ee Roman Abramovich ayaa ah bilyaneer ay iska dhaliyeen waalid Russia iyo Isreal ka soo jeedaa, waxaana la ogyahay in markii dalku galka UK uu ka dhacay in uu soo qaatay dhalashada Isreal.
Roman Abramovich iyo Robert Kraft ayaa soo dajiyay fikrada ah in Chelsea ay May 15 oo ahayd saddex maalmood kadib maalintii Premier league ugu danbaysa ay USA kula ciyaareen kooxda New England Revolution kulankan oo lacagta ka soo baxda taakulayn doono la dagaalanka yuhuud nacaybka.
Dhaawaca Ruben Loftus-Cheek
Laakiin hadda oo ay Chelsea kulankan ku soo wayday adeegii Ruben Loftus-Cheek ayay jamaahiirta Blues cadho kula dhaceen Roman Abramovich oo sabab kulankan u ahaa iyo Sarri oo ciyaartoyda muhiimka ah soo safay.
Si kastaba ha ahaatee, Ruben Loftus-Cheek ayaa la filaya in uu si rasmi ah xili ciyaareedkiisii u soo dhamaaday oo aanu qayb ka noqon karin finalka Europa League ee May 29 ka dhici doona caasimada Baku.
Faah faahinta kulankan oo aanu bishii March 2019 idiin soo gudbinay halkan ayaad ka akhrisan kartaa.